Yakakwira Mhando Yakachena kuchena Steroid Testosterone Enanthat CAS 315-37-7 nemutengo wakanaka Mugadziri uye Mutengesi | Zhuoer
Kwakachena kuchena Steroid Testosterone Enanthat CAS 315-37-7 nemutengo wakanaka
Steroid Testosterone Enanthat
Kuchena: 97.0 ~ 103.0%
Testosterone enanthate rudzi rweyerogen drug, uye inogadzirwa ne testosterone proprionate uye testosterone enantate. Maitiro ayo akafanana neaya e testosterone acetate, ayo anosanganisira kusimudzira kuvandudzwa kwenhengo dzepabonde dzechirume uye zvebonde zvechipiri uye kuramba estrogen. Iyo zvakare ine mapuroteni ekufananidza mhedzisiro, ayo anoibvumira iyo kubatsira mhasuru kukura uye kuwedzera uremu.
Nzvimbo yakanyunguduka 34-39 ° C
Nzvimbo yekubikira 463.22 ° C (fungidziro yakaoma)
kuwanda 1.0562 (fungidziro yakaoma)
Kuchengetedza temp. 2-8 ° C
Muchena kana Anenge Akachena Muchena Poda
Mahara Heptanoic acid
Organic Volatile Kusachena
kusachena kamwechete: 1.0% max
kusachena kwese: 2.0% max
Testosterone enanthate inogona kudzvinyirira iyo pituitary gland uye kusimudzira bonde hormone secretion, nokudaro ichideredza iyo endo native testosterone yakavanzika neLeydig maseru, ayo anozadzisa chinangwa chekumisa spermatogenesis.
Testosterone enanthate inogona kushandiswa seyakareba-nguva yemurume yekuzvarwa yekudzivirira mushonga. Iyo kiriniki inoshandiswa kurapa murume hypogonadism uye kukwana kwegonadal, bonde nhengo hypogenesis, kushaya mbereko, eunuchism, uye cryptorchidism. Inogona zvakare kushandiswa kurapa kwevakadzi kusagadzikana kweutachiona kubuda ropa, menopausal syndrome, gomarara repazamu uye gomarara remudumbu. Inogona zvakare kubata cirrhosis, aplastic anemia, osteoporosis uye zvimwe zvirwere zvinoparadza.
Ndinofanira sei kutora Steroids Testosterone Enanthat CAS 315-37-7?
Pashure: Fekitori inopa 2-Nitrobenzaldehyde / O-Nitrobenzaldehyde CAS 552-89-6 nemutengo wakanakisa
Zvadaro: Yakachena kuchena Steroids Nandrolone Decanoate CAS 360-70-3 nemutengo wakanaka
Factory inopa Biological buffer 2- [Tris (hydrox ...
Mugadziri Tris (2-carboxyethyl) phosphine Hydr ...